Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-VP entsha yeNtengiso ibhengezwe yi-iN2L
I-iN2L, umboneleli ophambili wesisombululo sokuzibandakanya kwidijithali esenzelwe ukuhlala kwabantu abaphezulu, uyaziqhenya ngokubhengeza ukongezwa kukaTim Jones njenge-VP entsha yeNtengiso. Kwindima yakhe, uJones uza kunika ingxelo kuLisa Taylor, i-CEO ye-iN2L, ukuqhuba iqhinga lokuthengisa elijolise ekukhuleni nasekuncedeni ukuhambisa isindululo sexabiso laso sexesha elide kwintengiso ebanzi yabantu abadala.
"Siyavuya ukwamkela uTim kwiqela lethu njengoko siqhubeka nomsebenzi wethu wokuphucula amava okuguga," utshilo uTaylor. “Njengenkokheli yentengiso kwizisombululo zokuzibandakanya kwabantu abadala, sidinga inkokheli yokuthengisa enamandla kunye nembono njengoTim ukusazisa kwisigaba sethu sokukhula. Ubungcali bakhe obunzulu ekusebenziseni iindlela zokuthengisa ziya kuba luncedo kwi-iN2L. ”
UTim uzisa ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kuthengiso lwetekhnoloji yezempilo kwi-iN2L. Isicwangciso sakhe sokuthengisa esigqibeleleyo sigxile ngokulinganayo ekuqhubeni ukukhula kweshishini elitsha, ngelixa kuphuhliswa ulawulo lweakhawunti olusebenzayo kunye neenkqubo zokugcina abathengi. Kutshanje, njenge-VP yokuThengiswa kwamaShishini eRelias, uTim wayejongile ukucwangciswa kwesicwangciso kunye nesicwangciso sexesha elide.
"Ngokuyinxenye ngenxa yobhubhane, ngokuyinxenye ngenxa yokutshintsha kweemvakalelo, imakethi yokuhlala ephezulu ikwixesha elimangalisayo lokuyila kunye nokuhamba," utshilo uJones. “Baninzi kakhulu amandla okukhula - ngakumbi njengoko kuqhutywa yindlela izisombululo zokuzibandakanya kwidijithali ezinokukhuthaza amanqanaba amakhulu onxibelelwano, ukwaneliseka kunye nokuba sempilweni phakathi kwabahlali. Kuliwonga kum ukunceda ukukhula kwe-iN2L njengoko bevelisa iindlela ezintsha zokukhulisa ubudlelwane obunentsingiselo kunye nokuzaliseka kobuqu phakathi kwabantu abadala. ”
Ngokugxininisa ekudalweni kwexabiso lokwenyani, intanda-bulumko kaJones yentengiso isekwe ekuhambiseni ukuphunyezwa okungagungqiyo, inkqubo kunye nokuphuculwa kokuzibandakanya. Indlela yakhe yokugxila kutyalo-mali kubudlelwane obuqinileyo bomntu, ngakumbi phakathi kwenqaku lomthengi, impumelelo yomthengi kunye nentengiso.
“UTim ubeka ibar phezulu. Amandla akhe alele ekuphakamiseni iqela lakhe liye kwinqanaba lempumelelo, ”utshilo uTaylor. "Sizimisele ukubona indlela izakhono zobunkokeli bakhe ezizodwa ezisiphucula ngayo ukukwazi kwethu ukuzisa amanqanaba amatsha kumava abathengi."